जनयुद्धमा टिक्न नसकेपछि प्रचण्ड डराएरै १२ बुंदे सहमति गरे::Pathivara News
जनयुद्धमा टिक्न नसकेपछि प्रचण्ड डराएरै १२ बुंदे सहमति गरे
फागुन १ गते नेपालमा चार वटा दिवस एकै दिन मनाइन्छ। सेना दिवस,रेडियो दिवस,जनयुद्ध दिवस र महाशिवरात्रि दिवस। सबै जना आफ्नु रुची र विचार अनुसारको दिवस मनाइ रहेका हुन्छन। बिगतमा जनयुद्ध र माओबादी पार्टीमा आबद्ध भएको तर यतिखेर माओबादी पार्टीमा पनि संलग्न नरहेको र संगठनिक रुपले अन्य कुनै पार्टीमा पनि आबद्ध नभएका पूर्व सभासद एकराज भण्डारीसंग माउन्टेन टेलिविजनले तपाई येतिखेर साँच्चै बिरक्तिएको हो भनेर कुराकानीको सुरुवात गर्दा एकराज भण्डारी भन्छन- मैले जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै पार्टीमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरें। म कत्ति पनि बिरक्तिएको छैन।
म आफ्नो विचार, आन्दोलन र अभियानमा नै छु । म अहिले पनि जनयुद्धकै एजेण्डामा छु , कुनै पनि संगठनमा आवद्ध हुनु नहुनु त्यो मेरो निजि कुरा भयो। अहिले म सांसदको किनबेच हुने ठाउँमा नभएको मात्रै हुँ तर म बिरक्तिएको छैन।
नेपाली सेनाले मनाउने सेना दिवसको बारेमा कुरा गर्दै उनी अगाडी भन्छन- सेना दिवस सेनाको स्थापना दिन त होला तर सेना दिवसको सान्दर्भिकता कति होला ? किनकि यो शाही सेनाको स्थापना दिवस हो। दुवै सेना एक भैसकेपछि यो दिवसको कत्तिको अर्थ रहन्छ र?
आफनो राजा बचाउन नसक्ने सेनाले सेना दिवस मनाउनुको म कुनै औचित्य देख्दिन। लडाइमा नेपाली सेनाले हारेकै हो र जितेको त जनमुक्ति सेनाले हो। तर युद्ध जित्ने त्यही जनमुक्ति सेना नेपाली सेनामा विलयन हुनु चाँहि बिडम्बना हो।
प्रचण्ड र बाबुरामले जनयुद्धको एजेण्डा छाडेको सन्दर्भमा भण्डारी भन्छन- उहाँहरुको बारेमा मलाई कुनै कन्फ्युजन पनि छैन फ्युजन पनि छैन। जनयुद्धको नारा छाडेर अहिले उहांहरु संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले जनयुद्धको एजेण्डा छाडेको क्लिएअर छः।
अहिलेको शासन पनि दलालहरुले चलाएका छन्। राजनीति र पूँजी दुवै दलालहरुको हातमा गयो।
जनयुद्धको उद्धेश्य पूरा भयो त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन–जनयुद्धको उद्धेश्य पूरा भएको छैन। सामन्तबादको ठाउँमा दलालहरु आए तर त्यो ठाउँमा पूँजीबाद आउनुपर्थ्यो। तर भएन, हिजो सर्बहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेताहरु नै आज दलाल पून्जीबाद्को नेतृत्व गर्ने नेता भए। उनीहरुबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै काम भएन।
कुराकानीको क्रममा उनी अगाडी भन्छन- देशमा नत: पूर्ण लोकतान्त्र्रिक संबिधान बन्यो नत: झूटा मुद्धाहरुबाट योद्धाहरुले मुक्ति नै पाए। बिद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै सत्ताको लालची बनेर मलाई पनि ठाउं देउ भनेर सत्तालिप्सामा टासियो । अहिले आएर त पार्टी एकीकरणका लागि लम्पसार नै परेर पार्टी नै बिघटनको संघारमा पुगिसकेको छ।
भण्डारी भन्छन- माओबादी आन्दोलन सकिएको छैन। तर माओबादी पार्टीलाई त्यसको नेतृत्वले बिसर्जन्मा लागिसक्यो। बैचारिक रुपमा एमाले र माओबादी केन्द्र एक ठाउँमा आइसक्यो।माओबादी, एमाले, कांग्रेसको विचार भनेको दलाल संसदीय ब्यबस्था नै हो। प्रचन्डले माओबादी अभियान छाडिसके। दुई पार्टी एक भएर महाधिबेसनमा गैसके पछी यिनले आफ्नो पार्टीको नामको अगाडी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि राख्ने छैनन्, तपाई लेखेर राख्नुस। त्यसैले क्रान्तिकारी विचार छाडीसकेपछी प्रचण्ड अब प्रचण्ड हैनन् पुष्पकमल दाहाल मात्र हुन्।
प्रचण्डको बारेमा कुराकानी गर्दै भण्डारी भन्छन–प्रचण्ड एकजना चलाख खेलाडी हुन्। उनले जनयुद्धको नेतृत्व गरेकै हुन् । तर जनयुद्ध घनिभूत हुदै जाँदा उहाँ तर्सिनु भयो। उहाँले जमिनमा टेक्न सक्नु भएन। प्रचण्ड डराएरै र जनयुद्धमा टिक्न नसकेरै १२ बुंदे सहमति बनेको हो।
आफ्नो विचार अत्यन्त खरो र प्रष्ट ढंगले राख्ने एकराज भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्टहरु प्रति नेपाली जनताले कस्तो दृष्टिकोण राख्छन,एमाले र माओबादीको एकता हुन्छा कि हुदैन,विप्लव र मोहन बैध्यका बारेमा उनले के के भने भनेर जान्नका लागि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।
अब प्रचण्ड विरुद्ध विप्लव उत्रिन्छन्